Fanjakana matanjaka… miantehitra amin’ny vahoaka | NewsMada
Fanjakana matanjaka… miantehitra amin’ny vahoaka
Ny mpitondra no mitondra, ny vahoaka: avy amin’ny vahoaka ny fahefam-pitondrana, ampindraminy araka ny fe-potoana voafaritry ny lalàna. Araka izay nifanarahana tamin’ny fifidianana io: hanatanteraka ny fanamby sy ny fampanantenana tamin’ny fampielezan-kevitra nahavoafidy azy ny mpitondra.
Tokony hiantehitra amin’izay fahefana avy amin’ny vahoaka izay ny mpitondra. Na amin’ny fitantanan-draharaham-panjakana ankehitriny io, na ny mbola ho avy amin’ny fe-potoana manaraka. Mby aiza izay hoe fanajana ny fahefana avy amin’ny vahoaka ifotony izay, raha izay misy sy iainana amin’izao?
Tsy misy tsy mikaikaika izao fa ambany maso tsy hita ny vahoaka, na hoe fototry ny fahefana aza. Tohatra fiakarana. Vato tsindry ahazana: nony maloka ny andro, atsipy. Fa maloka tokoa izao ny andro; eny, na mbola tsy maina aza ny ravina nihinanana. Tsy ahita-mangirana izay fihatsaran’ny fiainam-bahoaka.
Efa tsy miantehitra amin’ny vahoaka intsony ny mpitondra? Na tsy miraharaha aza… Tsy hita intsony izay marina, na iza na inona izao no inoan-teny. Momba ny “Raharaha Anjozorobe”, ohatra, na ny kere any atsimo, na ny andramena tratra any Singapour… Na ny fifampitokisana aza, tsy hita mazava intsony.
Tsy ny lainga ihany izao no manjaka sy ampanjakaina, fa eo koa ny basy… Izay mihetsika rehetra na mitady hikofoka fotsiny aza, ihenjanana sy enjehina ho manohintohina filaminam-bahoaka, manongam-panjakana. Miandry azy ny mpitandro filaminana, ny fitsarana, ny fonja… Ho tonga hatraiza?
Tsy vitan’ny lainga sy ny basy? Manjaka koa ny vola amin’ny karazan-kolikoly. Raha misy ny maty tsy manota, ao ny tsimatimanota… Aiza ny hoe tany sy fanjakana tan-dalàna amin’izany? Na fahalemen’ny fanjakana ny fianteharana lava amin’ny lainga, basy matetika, vola isaky ny mihetsika…
Ny mpitondra no mitondra, ny vahoaka. Raha miantehitra amin’ny vahoaka ny mpitondra: misy fototra ijoroana sy miaro, tsy matahotra milaza ny marina, mikely aina amin’ny asa… Izany ve izao iainana izao? Na mahatonga ny fampiasana basy sy vola ny lainga, na mampandainga ny basy sy ny vola…